Dzimba - Chikafu - uye zvimwe zvakakosha Archives | Utah Pride Center
musha » Dzimba - Chikafu - uye zvimwe zvakakosha zvinodiwa
Directory Category: Dzimba - Chikafu - uye zvimwe zvakakosha zvinodiwa
Dzimba - Chikafu - nezvimwe zvakakosha zvinodiwa
2021 Utah Rent Ruregerero
COVID-19 Coronavirus, Dzimba - Chikafu - nezvimwe zvakakosha zvinodiwa
Uri kutambura here kubhadhara rent?
Iyo Utah Housing Rubatsiro Chirongwa inogona kubatsira varipiri vasingakwanise kubhadhara rendi yavo uye zvinoshandiswa nekuda kwemamiriro anoenderana neCOVID-19. Iwe unogona kuve unokodzera rubatsiro rwekurenda kana iwe ukasangana zvese zviri zviviri zvinotevera zvinodiwa:
Yakabatanidzwa yakazara mari kana pasi pe100% nzvimbo yepakati medhi mari (iwo masevhisi pazasi anogona kukubatsira kuona izvozvo)
Wakaona kurasikirwa kwemari kana kunetseka kwemari kwakabatana neCOVID-19
Dzimba Dzakakurirwa muEmergency COVID-19 Ruyamuro Pasuru
$ 25 bhiriyoni muEmergency Rental Assistance (ERA) inowanikwa kusvika Zvita 31, 2021 uye kuwedzerwa kweCDC's federal eviction moratorium kusvika muna Ndira 31, 2021.
Nemutemo, nyika yega yega ichagamuchira yakaderera madhora mazana maviri emamirioni eRA. Inofungidzirwa, Utah (nyika nehurumende dzemunharaunda kana dzikashanda) dzichawana $ 200.
Kubhadhara kuchaitwa zvakananga kumatunhu, matunhu, hurumende dzemadzinza, uye hurumende dzemunharaunda dzine vanopfuura mazana maviri ezviuru vagari. Kuti nyika kana nzvimbo vawane mugove wavo we ERA mari, vanofanirwa kuendesa vakapedzisa ruzivo rwekubhadhara uye kusaina kusaina kwemitengo yemitengo na200,000: 11 pm ET muna Ndira 59,
Salt Lake City, Davis County, Salt Lake County, Utah County uye Weber County vanokodzera kunyorera.
Mari dzinofanirwa kushandiswa kumhuri dziri pasi pe80% AMI, uye inoti uye hurumende dzemunharaunda dzinofanira kukoshesa.
dzimba dziri pasi pe50% AMI, kana
avo vasina rovha uye vanga vasingashande kwemazuva makumi mapfumbamwe.
Kuti uwane rumwe ruzivo, ndapota verenga pepa rechokwadi uye shanyira US Treasure webhu peji
MIBVUNZO: Rubatsiro rweEmergency Rental
Inofungidzirwa Kugoverwa kweEmergency Rental Rubatsiro (NLIHC)
Rumwe ruzivo nezve dzimba dzekushandisa muUtah, ndapota enda kune iyo Utah Housing Coalition's webhusaiti.
Chitaurwa Dzimba Dzisingasvikike (fomu)
Accessibility, Dzimba - Chikafu - nezvimwe zvakakosha zvinodiwa
Disabled Rights Action Committee (DRAC) inounganidza nhepfenyuro dzemunharaunda uye inoteedzera kutyorwa kwedzimba kwakanaka muUtah. Iyo Fair Housing Act inorambidza kusarura uku nekuda kwerudzi, ruvara, nyika yakabva, chitendero, bonde, chinzvimbo chemhuri, uye hurema. Mimwe mitemo yakasiana-siana yekodzero dzevanhu, inosanganisira Musoro VI weCivil Rights Act, Chikamu 504 cheRehabilitation Act, uye maAmerican anehurema Mutemo, unorambidza kusarura mudzimba uye zvirongwa zvekuvandudza munharaunda nezviitiko, kunyanya izvo zvinobatsirwa neHUD mari.
Kana iwe uchigara mukati kana kuti uchangobva kushanyira chivakwa chedzimba chakange chisingasvikike, ndapota tiudze nezve chiitiko chako. Tichatevera kuti tione kuti zvirema zvacho zvinodikanwa here kutevedzera zvinodiwa neFair Housing Act.
Kana uine chero mibvunzo, ndapota email pa contact@disabledrightsutah.org
Salt Lake Valley COVID-19 Mutual Rubatsiro
@Salt Lake Covid-19 Mutual Fund isangano rinoshamisa reMunharaunda iro rinopa rubatsiro kuvanhu neku: kuendesa grocery, zvekurapa, zvekushandisa mumba, kutsigira vezera, uye kupa rubatsiro rwemari rwechimbichimbi.
SLC Yakavhurika Mhepo Inogara Musangano
Tarisa uone chirongwa cheSLC Open Air Shelter chirongwa chekupa kana kubatanidzwa nevavakidzani vedu vemunharaunda vasina kubatsirwa (vari kutsvaga mari yekubatanidza wifi yeCamp Last Hope izvozvi). Twitter @OAS_SLC